दुनियाको सबैभन्दा विषालु च्याउ, छुँदा मात्र पनि जान्छ ज्यान ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/दुनियाको सबैभन्दा विषालु च्याउ, छुँदा मात्र पनि जान्छ ज्यान !
दुनियाको सबैभन्दा विषालु च्याउ, छुँदा मात्र पनि जान्छ ज्यान !
नेपालको धेरै ठाउँमा यसलाई च्याउको नामले चिनिन्छ। यो एक प्रकारको फंगस हो, जुन वर्षातको दिनमा जैविक पदार्थहरूमा आफैं उम्रन्छ । यद्यपि आजकल च्याउको व्यवासायिक रूपमा खेती सुरु भइसकेको छ । धेरै प्रकारका च्याउ हुन्छन् जुन खानको लागि प्रयोग हुन्छ , तर हालसालै अनुसन्धानकर्ताहरूले यस्तो खतरनाक र विषालु च्याउको एक प्रजाति पत्ता लगाएका छन् जुन खानेकुराबाट टाढा छ, यसलाई छोयो भने मात्र बिरामी हुने खतरा हुन्छ ।
अस्ट्रेलियामा भेटिएको यो विषालु च्याउ रातो रंगको हुन्छ । विज्ञहरूले पहिले सोचेका कि यस्तो फंगस जापान , कोरिया जस्ता एशियाका देशहरूमा मात्र देखा पर्छ , तर यो केही दिन अघि अस्ट्रेलियाको क्वीन्सल्याण्डमा फेला पर्यो । संचार माध्यमका अनुसार जापान र दक्षिण कोरियामा यो विषालु च्याउको कारण धेरै मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन्। पारम्परिक औषधीमा प्रयोग गरिने फंगस सम्झेर यसलाई चियासँग मिसाएर खाएको कारण मानिसहरुले ज्यान गुमाएको बताईएको छ ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो च्याउ यति विषालु छ कि यसलाई खाँदा हाम्रो शरीरको अंगले काम गर्न छोड्छ ,यस्तै यसले दिमागी क्षति सम्म पनि पुर्‍याउँन सक्छ । यहाँ सम्म कि केवल यसलाई छुँदा यसले शरीरमा एल्लार्जी जस्तो बिमारी निम्त्याउँछ। जेम्स कुक विश्वविद्यालय (जेसीयू)का अन्वेषकहरूका अनुसार यो मात्र एक यस्तो च्याउ हो जसको विष छालाबाट पनि हाम्रो शरीरमा जान सक्छ ।
पोडोस्ट्रोमा कोर्नू-डेम नामको यस विषालु च्याउ पहिलो पटक चीनमा १८९५ मा फेला पारिएको थियो। पछिल्लो रिपोर्टका अनुसार यो च्याउ इन्डोनेसिया र पापुआ न्यू गिनियामा पनि देखिएको छ। बी.बी.सी का अनुसार डाक्टर ब्यारेटले रिपोर्ट गरे कि अष्ट्रेलियामा च्याउलाई बढी प्राथमिकता दिइएन।
अझै पनि लोग्नेको गोडा धोएर पानी खानुपर्छ र भन्या ?
ललितपुरकाे भाडावालहरुलाई प्रवेश निषेध,
एसईईका विद्यार्थीलाई परीक्षा बोर्डले नै प्रमाणपत्र दिन्छ : शिक्षामन्त्री